तीन तहकै निर्वाचन सकेपछि मात्र अर्को सरकार बन्ने होः सञ्चारमन्त्री कार्की « प्रशासन
तीन तहकै निर्वाचन सकेपछि मात्र अर्को सरकार बन्ने होः सञ्चारमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संसद्भित्र भएका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरुबीच कुनै फाटो नपारी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्की दलहरुबीच चाँडै सहमति कायम हुने र निर्वाचनको वातावरण बन्नेमा आशावादी छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी पङ्क्तिमाझ बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनु हुने कार्कीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा निर्वाचन, समसामयिक राजनीति र प्रेस जगत्का चुनौतीको सेरोफेरोमा रहेर वरिष्ठ समाचारदाता नारायण न्यौपाने र हरि लामिछानेले लिएको अन्तर्वार्ताका सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
हामी एमाले समेतलाई लिएर मधेसमा चुनाव प्रचारमा जाने स्थिति बनाउन चाहन्छौं। मधेसमा चुनावको माहोल बनोस्, बन्द हडताल नहोस्, सबै मुख्य धारका दलहरु चुनावमा होमियून् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसैले सरकार एउटालाई टाढा र अर्कोलाई नजिक बनाउने पक्षमा छैन । त्यसका लागि नै समय लागेको हो । अन्यथा क्षणभरमै निर्णय भइहाल्थ्यो नि !
फागुन ७ गतेलाई कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ रु यसको महत्व अब कतिको छ ?
सरकार मातहतका संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिएको छ । अरु ठूला सञ्चारगृहलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न भनेका छौँ । यसमा सम्झौता हुन सक्दैन । ठूला सञ्चार माध्यमका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने भए आफूहरु कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ भनेर उनीहरुले भनेका छन् ।